Sergio Aguero oo SHIL halis ah ku galay dalka Holland…(Waa sidee xaalkiisa?) – Gool FM
Sergio Aguero oo SHIL halis ah ku galay dalka Holland…(Waa sidee xaalkiisa?)
(Holland) 29 Sebt 2017. Sida ay sheegayaan warar dhawaan gal ah Sergio Aguero ayaa shil aad u halis ah ku galay dalka Holland.
Baabuurkii (Taxi) waday dhaliyaha Manchester City ayaa la warinayaa inuu ku dhacay baalayaasha Korontada, waxaana suuro gal ah inuu feeraha ka jabay Aguero.
Haddii la xaqiijiyo sheekadan, Aguero ayaa garoomada seegi doona muddo labo bilood ah wuxuuna sida cad seegayaa kulanka adag ay berito Stamford Bridge ku wada yeelan lahaayeen Chelsea iyo Man City.
Weeraryahanka reer Argentina ayaa ku sugnaa magaalada Amsterdam si uu u daawado Riwaayad uu sameynayay heesaaga reer Colombia Maluma marka uu Baabuurkii u siday garoonka diyaaradaha uu ka weecday wadada.
Wararku waxay intaa ku darayaan in laacibka uu ka bad baaday dhaawac intaan ka halis badan maxaa yeelay wuxuu xirnaa suunka la xirto marka baabuurta la saaran yahay (seatbelt).
Sheekadan waxaa bogga Twitter-kooda ku shaaciyay kooxdii hore ee Aguero Independiente kuwaa oo soo dhiqay qoraal ay ku muujinayaan inay garab taagan yihiin xiddigoodii hore xaalada adag ee la soo daristay.
Sababta Carlo Ancelotti looga ceyriyay Bayern Munich oo daaha laga rogay
Michael Owen oo saadaaliyay kulamada Premier League…(Muxuu ka yiri Chelsea vs Man City??)